Zebra Fabric Vagadziri & Vatengesi - China Zebra Fabric Fekitori
2020 Nyowani Dhizaera Verman Anopofumadza Mucheka 3m Upamhi Hofisi
Verman bofu jira chigadzirwa chakakwidziridzwa cheShangri-La bofu rejira. Izvo hazvingochengetedze chete kusanzwisisika kwechidzitiro cheShangri-La bofu jira, asi zvakare iine yakapfava fashoni maitiro eanetian blinds. Iyo yakavhurika webhu dhizaini yeverman bofu jira iri nyore kubvisa zuva nezuva guruva, kuburuka uye rimwe basa rekuchenesa. Boka raVerman jira rakapofumadza ndiyo sarudzo yakanaka yepurojekiti yako inopofumadza. Iyo jira inoshandisa yakakosha shinda uye inoitwa yakanyanya-tembiricha yekumisikidza kurapwa, iyo yakasimba uye isingatore.
China Fekitori Kupa Silhouette inopofumadza Mucheka 100% Polyester
Silhouette bofu jira chigadzirwa chakakwidziridzwa cheShangri-La bofu jira, isarudzo yekuchengetedza zvakavanzika uye kudzora mwenje. Iyo banga rinomiswa pakati pezvikamu zviviri zveescreens. Kana bofu rikavhurwa, nzvimbo dzinoyevedza dzinogona kuoneka kuburikidza nema skrini, uye mwenje unopinda mumba unosvinwawo kuti uve nyoro; kana bofu rikavharwa, iwe unogona kuve nechokwadi chekuvanzika kwega uchisimbisa chimiro chakapfava cheiyo Shangri-La bofu.
Muchidimbu, siluetti yedu inopofumadza machira ndiyo sarudzo yakanakisa yemafekitori anopofomadza kana vekutengesa. Tinogona kupa mahara emahara e silhouette inopofumadza jira kune vatengi vedu. Uye yega yega roll yemurarabungu inopofumadza machira anofanirwa kupasa iyo yemhando bvunzo isati yatumirwa.
Yakareba Manera Tepi Shangri-La inopofumadza Mucheka 100% kudzima magetsi
Manera tepi shangri-la inopofumadza machira chigadzirwa chakakwidziridzwa cheShangri-La bofu. Izvo hazvingochengetedze chete kusanzwisisika kwechidzitiro cheShangri-La bofu jira, asi zvakare iine yakapfava fashoni maitiro eanetian blinds. Groupeve Ladder tepi shangri-la inopofumadza machira anogona kukuunzira iwe kunzwa kusingagumi kune zvakasikwa, wakasununguka uye uchifara, zvakare kunogona kukuunzira iwe kunzwa kwekunyarara uye kuve muparadhiso. Iyo yakakamurwa kuita semi-kudzima magetsi manera tepi shangri-la bofu jira uye kudzima magetsi manera tepi shangri-la bofu jira.
Izvo zvinhu zveLadder tepi shangri-la bofu jira ndeye 100% polyester. Isu tinopa emahara sampuli kune vese vatengi, iwe unogona kutarisa mhando uye sarudza vara zvakananga pamberi peodha. Uyezve, machira edu akapfuma muvara uye anotevedzera mafashoni epasi rese.
Dhizaini Yemazuva Ano Verman Anopofumadza Mucheka 100% Polyester
Verman bofu jira chigadzirwa-chitsva dhizaini inosanganisa machira skrini, hwindo skrini uye venetian bofu. Iine mabasa ekudzikisa uye kushongedza kweketeni. Uye inoshandiswa zvakanyanya mumahofisi, dzimba, mahotera, mafekitori uye zvimwe zviitiko. Bhande raVerman jira rakapofumara rinogona kukuunzira iwe kunzwa kusingagumi kune zvakasikwa, wakasununguka uye uchifara, zvakare kunogona kukuunzira iwe kunzwa kwekunyarara uye kuve muparadhiso. Inogona kuve yakakamurwa kuita semi-kudzima magetsi verman inopofumadza machira uye kudzima magetsi everman inopofumadza machira erima.
Izvo zvinhu zveverman inopofumadza machira ndeye 100% polyester. Isu tinopa emahara sampuli kune vese vatengi, iwe unogona kutarisa mhando uye sarudza vara zvakananga pamberi peodha. Uyezve, machira edu akapfuma muvara uye anotevedzera mafashoni epasi rese.
Nyowani Dhizaina Yakashongedzwa Silhouette inopofumadza Mucheka 100% kudzima magetsi
Silhouette bofu jira chinhu chitsva dhizaini iyo inosanganisa machira skrini, hwindo skrini uye venetian bofu. Iine mabasa ekudzikisa uye kushongedza kweketeni.
3. Pukuta kuchenesa ndeyekuti uwane kuchenesa kwakadzika, ndapota shandisa mudziyo wekutsva nemusoro webrashi kuti unyatsotsvaira. Iwe unogona zvakare kushandisa bvudzi kuomesa (isina kugadzirirwa kupisa) kuti ubvise guruva pakushongedza kwehwindo.
Yedu silhouette inopofumadza machira ndiyo yakanakisa sarudzo yemapofu mafekitori kana emahara. Tinogona kupa mahara emahara e silhouette inopofumadza jira kune vatengi vedu. Uye yega yega roll yemurarabungu inopofumadza machira anofanirwa kupasa iyo yemhando bvunzo isati yatumirwa.
Nyowani Dhizaina Wholesale Manera Tepi Shangri-La Anopofumadza Mucheka Kudzima magetsi
Manera tepi shangri-la inopofumadza machira chigadzirwa chakakwidziridzwa cheShangri-La bofu jira, isarudzo yekuchengetedza zvakavanzika uye kudzora mwenje. Boka revheji tepi shangri-la bofu jira rinogona kukuunzira iwe kunzwa kusingagumi kune zvakasikwa, wakasununguka uye uchifara, zvakare kunogona kukuunzira iwe kunzwa kwekunyarara uye kuve muparadhiso. Ndiyo sarudzo yakanaka yepurojekiti yako inopofumadza. Iyo jira inoshandisa yakakosha shinda uye inoitwa yakanyanya-tembiricha yekumisikidza kurapwa, iyo yakasimba uye isingatore.
Iyo rwakapetwa kureba kuri 30m, uye kurongedza isimba pepa chubhu pane roll. Isu tinopa emahara sampuli kune vese vatengi, iwe unogona kutarisa mhando uye sarudza vara zvakananga pamberi peodha. Uyezve, machira edu akapfuma muvara uye anotevedzera mafashoni epasi rese.
Fekitori Mutengo Verman Anopofumadza Mucheka Semi-Kudzima magetsi
Verman inopofumadza machira chigadzirwa chakakwidziridzwa cheShangri-La machira mapofu, icho chinhu chitsva dhizaini iyo inosanganisa machira machira, hwindo skrini uye venetian bofu. Iine mabasa ekudzikisa uye kushongedza kweketeni. Uye inoshandiswa zvakanyanya mumahofisi, dzimba, mahotera, mafekitori uye zvimwe zviitiko. Icho sarudzo yekuchengetedza zvakavanzika uye kudzora mwenje.
Izvo zvinhu zveverman inopofumadza machira ndeye 100% polyester. Iyo rwakapetwa kureba kuri 30m, uye kurongedza isimba pepa chubhu pane roll. Isu tinopa emahara sampuli kune vese vatengi, iwe unogona kutarisa mhando uye sarudza vara zvakananga pamberi peodha. Uyezve, machira edu akapfuma muvara uye anotevedzera mafashoni epasi rese.
Yakakwira Yemhando Manera Tepi Shangri-La Anoputira Mucheka 100% Polyester
Manera tepi shangri-la inopofumadza jira chigadzirwa chitsva-chinosanganisa machira machira, hwindo rewindo uye venetian bofu. Iine mabasa ekudzikisa uye kushongedza kweketeni. Uye inoshandiswa zvakanyanya mumahofisi, dzimba, mahotera, mafekitori uye zvimwe zviitiko. Icho sarudzo yekuchengetedza zvakavanzika uye kudzora mwenje. Kana bofu rikavhurwa, iyo inoyevedza inoonekwa kuburikidza neescreens, kana bofu rikavharwa, iwe unogona kuona wega zvakavanzika.
Iyo jira inoshandisa yakakosha shinda uye inoitwa yakanyanya-tembiricha yekumisikidza kurapwa, iyo yakasimba uye isingatore. Uye izvo zvinhu zvemanera tepi shangri-la inopofumadza machira ari 100% polyester. Isu tinopa emahara sampuli kune vese vatengi, iwe unogona kutarisa mhando uye sarudza vara zvakananga pamberi peodha. Uyezve, machira edu akapfuma muvara uye anotevedzera mafashoni epasi rese.
Verman bofu jira chigadzirwa chakakwidziridzwa cheShangri-La machira mapofu, kubatanidza machira ejira, hwindo rewindo uye venetian bofu. Iyo ine mabasa ehujenya uye kushongedza kweketeni, izvo zvinoita kuti ive sarudzo yakanaka yekuchengetedza zvakavanzika uye kudzora mwenje. Bhande verman bofu jira rinogona kukuunzira iwe kunzwa kusingagumi kune zvakasikwa, wakasununguka uye unofara, zvakare kunogona kukuunzira iwe kunzwa kwekunyarara uye kuve muparadhiso.
Iyo jira inoshandisa yakakosha shinda uye inoitwa yakanyanya-tembiricha yekumisikidza kurapwa, iyo yakasimba uye isingatore. Izvo zvinhu zveverman inopofumadza machira ndeye 100% polyester. Isu tinopa emahara sampuli kune vese vatengi, iwe unogona kutarisa mhando uye sarudza vara zvakananga pamberi peodha. Uyezve, machira edu akapfuma muvara uye anotevedzera mafashoni epasi rese.